I-iPhone ene-iris scanner inokufika ngo-2018 | IPhone iindaba
I-iPhone ene-iris scanner inokufika ngo-2018
Ngokwako konke ukuvuza, iSamsung iya kuba ngomnye wabavelisi bokuqala (uFujitsu, umzekelo, sele enayo Usungule ezinye ngaphambili) ukufaka iskena se-iris kwenye yee-smartphones zabo. Iya kwenza njalo kulo nyaka kwaye isixhobo esikhethiweyo siya kuba yiGlass Qaphela 7. Kwiminyaka emibini kamva, ngokolwazi ipapashiwe kwiiDigiTimes, kwi U-2018 uza kufika i-iPhone yokuqala kunye neskena se-iris, Into ekhuseleke ngakumbi kunomfundi weminwe kodwa ikwanazo neengxaki zayo.
I-DigiTimes inezinga lokubetha elixubekileyo, ke ngoku ayinakulunga ngeli xesha njengoko ingakhange ichaneke kuqikelelo lwayo oluninzi. Ngokwam, andiyiboni iApple isungula i-iPhone ngenkqubo yokwazisa eyenza izinto zibe nzima ngakumbi kuthi, kwaye njengamava obuqu abonisa: Ndihlala ndiphuma ngebhayisekile ndibeke i-iPhone yam kwiziphatho. Ukuba ndifuna ukuvula i-iPhone, ndingayenza ngeminwe ngaphandle kwengxaki, okoko imeko iyahambelana nokwenzeka. Ukuba uneskena se-iris kuya kufuneka usijonge ngaphambili nakwimigama ethile, ke ngekhe ukwazi ukuyivula.
Ngaba siya kuba ne-iPhone ene-iris scanner kwi-2018?
Kwelinye icala, singacinga ukuba ukubonwa kwe-iris kuyasilela singasebenzisa i-fingerprint, kodwa kwimeko apho bekungayi kuba sengqiqweni ukukhusela ifowuni nge-iris yethu; Nabani na ofuna ukutsiba le tshekhi kuya kufuneka akhuphe ilihlo lakhe alinde ukuba iye kwinqanaba elilandelayo, Oko kukuthi, umfundi weminwe.
Kubalulekile ukukhankanya ukuba, kufuneka uqokelele umfanekiso, le nkqubo iya kuba nayo iingxaki kwiimeko zokukhanya eziphantsi, Into enokusonjululwa kakuhle ngokwandisa ukukhanya kwesikrini ngexesha lokwamkelwa. Kodwa ukuba, umzekelo, sifuna ukuyijonga ukusuka ebhedini nakwisiqingatha sokulala, kubonakala ngathi yeyona nto intle ehlabathini.
Ngayiphi na imeko, njengoko besesitshilo ngaphambili, oku kuqikelelwa kwenziwe ngumphakathi onenqanaba lokuphumelela elixubileyo, othe iApple iyakuthatha inyathelo kwisithuba seminyaka emibini. Abantu baseCupertino abadume ngokuba ngabokuqala ukusungula into, kodwa ngokuba ngabokuqala ukwenza into esebenzayo kwaye iluncedo, njengoko yenzayo ngenzwa yeminwe, izikrini zokuchukumisa, iiwotshi ezifanelekileyo kwaye ngokuqinisekileyo ziya kwenza ngeekhamera. Ukongeza, uya kuba neminyaka emibini ukuze ubone ukuba zeziphi iingxaki Qaphela 7 kunye nabalandelayo. Kuya kufuneka silinde ukubona ukuba bayayazisa na i-iPhone ngeskena se-iris kwaye ukuba iyasebenza ngaphandle kweengxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-iPhone ene-iris scanner inokufika ngo-2018
Bayeke iris nobisi kwaye basebenze kumagubu amandla amakhulu kunye namabali
Umcimbi webhetri ulityala.
Ukuyila okungaka kwantoni?
Iya kuhlala iyisithende se-Achilles se-iPhone ...
Ndivuma ngokupheleleyo, uAlexander noNero. Kwelinye icala, iyaqondakala kuba kunokuba yingozi ukusebenzisa itekhnoloji entsha engangqiniswanga ngokwaneleyo.
Kodwa oko akuthethi ukuba izinto ezingakumbi nangakumbi ziyongezwa kwaye ukuzimela kugcinwa kuphela.
UPedro Imbernon (@pimbernon) sitsho
Bahlekazi andazi ukuba andiyisebenzisi kangako njengokuba usenza kodwa i-iPhone 6s yam kunye nebhetri encinci kakhulu kunesidenge sam 6. Malunga nesihloko, 2018? Ngokwenene? Ngelo xesha iya kuba "yinto endala" kwezinye izixhobo
Phendula kuPedro Imbernon (@pimbernon)
UCydia Eraser, inguqulelo entsha yeCydia Impactor inxenye ehambelana ne-iOS 9
I-WhatsApp ihlaziyiwe kwaye ngoku singathumela i-emoji enkulu